Feltimaan fi Hamdok Tigraayitti atattamaan waliigaltee dhukaasa dhaaburra gahamuu akka qabu waliigalan – AMBO TV
Akka dubbi himaan Ministira Dhimma Alaa US Need Piraayis jedhetti, Jefrii Feltimaan Fulbaana 28 hanga Onkoloolessa 1, 2021tti Kaartuum wayita turanitti, Ministirri Muummee Sudaan Abdallaa Hamdok waliin wal arguun ce’umsa siyaasaa Sudaan keessa jiru, kan carraa dimokiraasii dhaloota keessatti takka argamu jedhamee, US cimsitee akka deeggartu ibsan.
Gaanfa Afrikaatti Ergamaan Addaa US kunis Abdallaa Hamdok akka dursaa yeroo ammaa Abbaa-taayitaa Mootummoota Misoomaaf Waloomanii (IGAD) ta’etti, walitti bu’insi Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaatiin akka furamuuf dhimmamuu isaatiif galateeffateera.
Jalqaba baatii Hagayyaa keessa Sudaan deeggarsa hawwaasa idil- adunyaa waliin mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti araara buusuuf hojii eegaluuf jakka jirtuu himuun ni yaadatama.
Wayita sana MM Abdallaa Hmadook, mootummaa Itoophiyaafi gaggeesitoota TPLF walitti fiduun karaa nagaa akka mari’ataniifi deeggarsi namoomaa lammiilee nagaa akka dhaqqabu gochuuf qaamolee lamaan waliin qunnamtii jalqabaniiru jechuun miidiyaan Sudaan Sudan Tribune gabaasee ture.
MM Hamdok yeroo sanatti kaka’umsa kan fudhatan daawwannaa Hoggantuun Dhaabbata gargaarsa Ameerikaa- USAID, Samantaa Paawor Sudaanii fi Itoophiyaatti erga taasisan booda ture.
Ji’uma Hagayyaa sana Ministirri Haajaa Alaa Ameerikaa, Antoonii Bilinkeen, dhimma waraana naannoo Tigiraay irratti MM Sudaan Abdallaa Hamdook waliin mari’atanii ture.
Sudaan waldhabdee mootummaa Federaalaafi TPLF gidduutti jiruuf jaarsa ta’uuf fedhii akka qabdus ibsitee kan turte ta’us, Itoophiyaan garuu haalli Sudaaniin amantee fudhachuu itti dandeessu hanga hin umamnetti fudhachuuf kan rakkattu ta’uu ibsitee turte.
Ce’umsa siyaasaa Sudaan irratti
MM Abdallaa Hamdok, dursaa Mana Maree Walabaa Sudaan Abdelfattah al-Burhan, akkasumas miseensota kaabinee mana maree walabaa Sudaan biroo waliin wal arguun kan dubbate Ergaa Addaa Jefirii Feltimaan, Yunaayitid Isteets adeemsa Sudaan gara sirna dimokiraasiitti ce’uuf taasisaa jirtu keessatti deeggarsa siyaasaafi dinagdee taasisuu akka itti fuftu dubbatan.
Feltimaan akka jedhetti, deeggarsi US biyyattiif taasiftu Waliigaltee Heeraa bara 2029 labsameefi Waliigaltee Nagaa-buusaa Juubaa bara 2020 irra gahame hojiirra oolchuufi dhiisuurratti kan hunda’udha.
“Daandii kanarraa maquuniifi wantota bu’uuraa [waliigalee sanaan] kaa’aman guutuu dhabuun hariiroo gar-lamee Sudaan US waliin qabdu kan akka gargargaarsa barbaachisaa US taasiftu, akkasumas nageenyarratti wal tumsuun humnoota raayyaa Sudaan ammayyeessuufi Dhaabbileen Maallaqaa Idil-addunyaa keessatti deeggartu balaarru buusuu danda’a,” jedhe.
Guyyaa muraasa dura lammileen Sudaan kumaatamaan lakkaa’aman ce’umsaa dimookirasii siviliin hogganamu akka gaggeefamu gaafachuuf magaalaa guddoo biyyattii Kaartumitti hiriira bahuun gaafatanii ture.
Torban darbe ammoo Sudaan keessatti yaalii fonqolcha mootummaa fashaala’e hordofuun qondaaltota waraanaafi qaama sivilii ce’umsa mootummaa biyyattii hogganaa jiran gidduutti hariiroon ture laafuun isaa dhaga’ameera.
Waldaan hojjattootaa fi rogeeyyiin hiriira mormii turerratti hirmaatan qondaaltootni waraana biyyattii mootummaa sivilii akka hundeessan gaafatan.
Qondaaltonni sivilii biyyattiis gaaffii hiriirtonni kaasan deeggaraniiru.
Bulchiinsa Joo Baayidan keessa Ergamaa Addaa Gaanfa Afrikaa US ta’uun kan itti-gaafatamummaan itti kenname Jefirii Feltimaan gara biyyoota Baha Afrikaafi Baha Gidu-galeessaatti irra deddeebiyuun marmaaraa jiru.
Kanaaf ammoo sababiin yeroo dhiyoon asitti sochiin siyaasa, diinagdeefi dhimmoota waraanaa Gaanfa Afrikaa keessa jiru dabalaa waan dhufeef, Ameerikaan ammoo sochii jiru kana keessatti haala fedhiin ishee hin miidhamne irratti hojjechuuf fedhuusheetu himama.
Previous PostPoolisoonni Finfinnee dubartii yeroo reeban viidiyoon waraabaman to’ataman
Next PostWill Ethiopia’s genocide be worse than Rwanda’s?